/ Products / vamwe / Trestolone Acetate (MENT) upfu
Rating: SKU: 6157-87-5. Category: vamwe
MUTSVENE unobatanidza uye unogadzira zvigadzirwa kubva ku gramu kusvika kukura kweTrestolone Acetate (MENT) powder (6157-87-5), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Trestolone Acetate (MENT) powder inonyanya anabolic steroid. Izvo zvinonziwo 7 alpha-methyl-19-nortestosterone (MENT powder), inoshandiswa steroid iyo inoonekwa seine simba kwazvo mumuviri, kupfuura simba re testosterone. Inofungidzirwa inobatsira kune chinangwa chekuvaka muviri uye simba rekudzidzisa.
Trestolone Acetate (MENT) pikicha yeupfu
Trestolone Acetate (MENT) powder Basic Characters
Name: Trestolone Acetate (MENT) powder
Molecular Kurema: 330.465
Trestolone Acetate (MENT) kushandiswa kwepoda mu steroidhe
Testolone Acetate powder (CAS 6157-87-5) inowanzonzi MENT powder.
MENT powder (CAS 6157-87-5) Kushandisa
Nezivo yakakura ye 50 mgs pazuva, vashandisi vanogona kutarisira kuwana mari yakawanda mukati memwedzi mitatu yekushandiswa. Zvinokwanisika kuwedzera simba mazinga uye musimba mashoma pamwe neupfumi hwehuwandu hwehuwandu hwemamiriyoni e20 munguva iyoyo.
Warning on Trestolone Acetate powder
Iyo jekiseni fomu yeTrestolone Acetate powder (CAS 6157-87-5) inoonekwa seyakanakisa nzira yekuendesa yeiyi anabolic steroid nepo mafomu emuromo achizoburitsa mhedzisiro inogutsa. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti muyero kiyi. Chero ani anoshandisa Trestolone Acetate poda anofanirwa kuteedzera ese madosi kuraira kune iyo tsamba kuti abvise zvakaipa mhedzisiro. Chiyero chakakodzera chichaunzawo mhedzisiro inonyatso shandiswa kana chishandiswa nguva dzese kwenguva yakareba.
Kune avo vakanyatsozvipira kuita zvakakwana muviri wavo, ivo vachatsvakurudza mikana yakasiyana-siyana kuti vasvike vavariro dzavo. Kushandiswa kweTrestolone Acetate powder ndiyo imwe nzira yekuwana nayo muviri wakaonda, wakakudzwa uye une huwandu hwakawanda hwemasisita. Zvinokwanisika kuti zvive nemigumisiro yakanaka kunze kwemigumisiro yakaipa, chimwe chikonzero icho vazhinji vachaedza nayo Trestolone Acetate powder uye mamwe anabolic steroid.
Nzira yekutenga Trestolone Acetate powder; kutenga MENT powder kubva kuAASraw